बजार Achives| Page2of 341
गरिमा विकास बैंकले ‘हायर पर्चेज’ कर्जा लिएका सेवाग्राहीलाई असार महिनाको पूरै ब्याज छुट दिने
काठमाडौँ । गरिमा विकास बैंकले हायर पर्चेज शीर्षकका कर्जा उपभोग गर्ने सेवाग्राही(ऋणी) लाई असार महिनाको व्याज रकम राहत स्वरुप पूरै छुट दिने दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ बैशाख १६ गतेको निर्देशन बमोजिमको वैशाख, जेठ र असार महिनाको ब्याजदरमा २ प्रतिशत …
बैंकको किस्ता स्थगन, ब्याजको पुनःविचार र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न यातायात व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ । महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई आज मन्त्रालयमा विज्ञप्ति बुझाउँदै यातायात व्यवसायमा रहेका समस्या सुनाउँदै सहुलियतको माग …
बजारमा सकारात्मक सर्किट लागेर बढिरहेको छ । यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिईरहेका छौं । तर सर्किट नलागी बजार बढ्नु पर्ने थियो । कम्तिमा पनि ३०।३५ अंकले बजार बढेको भए दिगो हुने थियो । अहिले त बजारमा सर्किट ब्रेक लागेकाले किन्नेले किन्न र …
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ असार २५ गतेदेखि, १० देखि १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्सले असार २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३० करोड रुपियाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गर्ने लागेको हो । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको कूल ३० कित्ता आईपीओमध्य कम्पनीले …
शेयर बजारमा आज पनि ६ प्रतिशतको ‘पोजेटिभ सर्किट’, डेढ घण्टामै बजार बन्द
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आजपनि ६ प्रतिशतले पोजेटिभ सर्किट लागेपछि कारोबार सुरु भएको डेढ घण्टामै बन्द भएको छ । आज डेढ घण्टा खुलेको बजारमा तीन पटकसम्म सर्किट ब्रेक लाग्यो । कारोबार खुलेको १३ मिनेटमै नेप्से परिसूचकमा पहिलो पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर २० …
सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपियाँ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य आज बढेको छ । सुन प्रतितोला ५ सय रुपियाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपियाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ७ सय रुपियाँ, तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार …
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो, यस्तो छ नयाँ मूल्य सूची
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य बृद्धी गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी मूल्य बृद्धी गरिएको हो । नियमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ र डिजल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपियाँ बृद्धी भएको हो । काठमाडौँका लागि अब पेट्रोलको …
कुमारी बैंक, गुडवील र आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा आज कुमारी बैंकसहित ३ वित्तीय संस्थाको डिबेञ्चर(ऋणपत्र) सूचीकृत भएको छ । कुमारी बैंकको ‘१०.२५ प्रतिशत केबीएल डिबेञ्चर २०७६’ ३० लाख कित्ता, गुडवील फाइनान्सको ‘१२ प्रतिशत गुडवील फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८३’ २ लाख ५० हजार कित्ता …
शेयर बजार जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बन्द गर्नु हुन्नः विज्ञ, बाध्यतावस गर्नु पर्योः बोर्ड अध्यक्ष
काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको शेयर बजारलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बन्द गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राय सुझाव लिने उद्देश्यले वेबिनारमार्फत् छलफल तथा अन्तर्क्रिया …
शेयर बजारमा ६ प्रतिशतको ‘पोजेटिभ सर्किट’, कारोबार बन्द
काठमाडौं । शेयर बजारमा ६ प्रतिशतको पोजेटिभ सर्किट ब्रेक लागेसँगै आजको लागि बजार बन्द भएको छ । आज कारोबार खुलेदेखि नै बजारमा बृद्धी भएको थियो । पहिलो १ घन्टा नपुग्दै ४ प्रतिशतको सर्किट लागेर २० मिनेट, दोस्रो पटक ५ प्रतिशतको सर्किट लागेर ४० …
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको स्थिर, यस्तो छ आजको बजार भाउ
काठमाडौँ । सुनको मूल्य आज घटेको छ भने चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुन प्रतितोला १ सय रुपियाँ घटेको छ भने चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजको लागि छापावाल सुनको …
काठमाडौँ । लामो समयपछि खुलेको शेयर बजार आज ४० मिनेटमै नेगेटिभ सर्किट लागेर २० मिनेट रोकिएपनि पुनः कारोबार शुरु भई सम्हालिएर बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले बिहान ११ः४० बजेसम्म ४ प्रतिशतले घटेपछि २० मिनेट शेयर कारोबार रोकेको थियो । त्यसपछि …